Tetikasa ASA iray : tohanana amin’ny fananan-tany ny tantsaha | NewsMada
Tetikasa ASA iray : tohanana amin’ny fananan-tany ny tantsaha
Ao anatin’ity fandaharanasa Asa ity ihany ny fanampiana ireo tantsaha amin’ny fananan-tany. Mba hahazoan’izy ireo miasa am-pilaminana, tetibola 4,2 tapitrisa euros avy amin’ny Agence française de développement (AFD) no hoentina manao izany asa izany. Fanatsarana ny fananan-tany any amin’ireo kaominina manodidina an’Antananarivo sy ny tontolo ambanivohitra.
Atao ny fiarovana ny fananan-tany sy fampitovian-jo ny lahy sy vavy hahazo tombontsoa mitovy. Apetraka any amin’ireo kaominina rehetra ireo ny fomba ahafahana miaro ny zo araka ny fanapariahana ireo sampandraharaha misahana ny fananan-tany. Homena tsara ho fantatr’ireo mpamboly sy mpiompy ireo ny drafi-panajariana ny fananan-tany sy momba ny hetran-tany. Politikan’ny fitondram-panjakana rahateo ny fanavaozana ny fananan-tany eto an-toerana.
Olana tsy tambo isaina eto amin’ny firenena ny ady tany. Voahalika matetika ny tantsaha efa namboly sy niompy hatramin’ny razamben’izy ireo amina velaran-tany iray, rehefa tonga ireo vahiny lazaina fa mpampiasa vola. Hatramin’izao, mbola miseholany izany olana izany, ary betsaka ity ady tany ity ao amin’ny fitsarana.
Ezahina, araka ity fandaharanasa ity, ny fanoratana ara-dalàna ny tanin’ireo tantsaha. Fantatra ny fahamaroan’ny tany tsy voasoratra ara-dalàna, tsy malaina hanao izany akory ny olona fa betsaka loatra ny dingana tsy maintsy lalovana ary lafo loatra ny sarany aloa, tsy zakan’ny fari-piainan’ny Malagasy. Izay no mahatonga ny fanararaotana ataon’ny sasany, indrindra fa mahazo vahana ny kolikoly any amin’ny sampandraharaham-panjakana maro.